eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल यी राशिलाई रहेको छ लाभ, आजको दिन कस्तो रहला त तपाइको दिन? जान्नुहोस ।
आजको राशिफल यी राशिलाई रहेको छ लाभ, आजको दिन कस्तो रहला त तपाइको दिन? जान्नुहोस ।
२०७८ असार ९ गते बुधबार ०१:३२
मेष:- राजनीतिक अवरोध हटाइनेछ। नाफाका अवसरहरू आउनेछन्। धार्मिक गतिविधिहरूमा चासो हुनेछ। व्यापार सहज रूपमा चल्नेछ। सहयोगीहरूले तपाईंलाई काममा सहयोग गर्दछन्। लगानी राम्रो हुनेछ। तपाईं प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग परिचित हुनुहुनेछ।...
मेष:- राजनीतिक अवरोध हटाइनेछ। नाफाका अवसरहरू आउनेछन्। धार्मिक गतिविधिहरूमा चासो हुनेछ। व्यापार सहज रूपमा चल्नेछ। सहयोगीहरूले तपाईंलाई काममा सहयोग गर्दछन्। लगानी राम्रो हुनेछ। तपाईं प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग परिचित हुनुहुनेछ। घर बाहिर सोधपुछ हुनेछ। त्यहाँ खुशी हुनेछ। कुनै हतार नगर्नुहोस् ।
वृष:- समाज सेवा मा एक प्रवृत्ति हुनेछ। प्रतिष्ठा बढ्नेछ। नयाँ आर्थिक नीति बनाइनेछ। कार्य प्रणालीमा सुधार हुनेछ। दीर्घकालीन रोगले समस्या निम्त्याउन सक्छ। काममा प्रभाव बढ्नेछ। व्यापार बढ्नेछ। गरगहनामा खर्च हुनेछ। भाइहरूले सहयोग गर्नेछन्। समय अनुकूल छ। फाइदा लिनु ।
मिथुन:- विवेकको प्रयोगले नाफा बढाउनेछ। एक ठूलो बाधा सामना गर्न सक्नुहुन्छ। रोयल्टी हुनेछ। हतार र तर्कहरू बेवास्ता गर्नुहोस्। रोकिएको धन पाउन सकिन्छ। व्यापार यात्रा अनुकूल हुनेछ। कसैको व्यवहारको लागि दुःख हुनेछ। काममा, तपाईं आफैंमा उच्च अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
कर्कट:- अप्रत्याशित खर्चहरू आउनेछन्। यात्रा गर्न हतार नगर्नुहोस्। चिन्ता र तनाव रहनेछ। स्वास्थ्यमा कमजोर हुनेछ। ठूलो खर्च हुन सक्छ। विवादलाई प्रोत्साहित नगर्नुहोस्। त्यहाँ आय कम हुनेछ। व्यवसायको गति ढिलो हुनेछ। जोखिम र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। मनमा बेचैनी हुनेछ।
सिंह:- प्रेम मामिलामा हतार नगर्नुहोस्। शारीरिक पीडा काम बाधा हुनेछ। त्यहाँ अप्रत्याशित लाभहरू हुन सक्छन्। यात्रा रमाईलो हुनेछ। काममा अनुकूलता हुनेछ। नाफा बढ्नेछ। लगानी गर्न हतार नगर्नुहोस्। साझेदारहरूले समर्थन गर्नेछन्। आवश्यक वस्तु हराइरहेको हुन सक्छ।
कन्या:- टाढाबाट शुभ समाचार प्राप्त गर्न सकिन्छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। त्यहाँ केही ठुलो काम गर्ने योजना हुनेछ। शक्ति र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। घरमा पाहुनाहरूमा खर्च हुनेछ। केहि शुभ कार्यहरू संगठित गर्न सकिन्छ। व्यापार ठीक हुनेछ। शत्रुहरू शान्त रहनेछन्। त्यहाँ खुशी हुनेछ।
तुला:- तपाईं साथीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। परिश्रमले फल फलाउनेछ। तपाईं आदर पाउनुहुनेछ। आफूसँग बहुमूल्य चीजहरू राख्नुहोस्। काममा उच्च अधिकारीहरूको खुशी हुनेछ। त्यहाँ नयाँ उद्यम सुरु गर्ने योजना हुनेछ। व्यवसायले अनुकूल नाफा दिनेछ। समय अनुकूल छ। त्यहाँ खुशी हुनेछ।
वृश्चिक:- केही नराम्रा खबरहरू पाउन सकिन्छ। पारिवारिक चिन्ताको विषय रहनेछ। कडा परिश्रम अधिक हुनेछ र लाभ कम हुनेछ। अरूबाट आशा नगर्नुहोस्। व्यापार ठीक हुनेछ। मातहतको कुनै सहयोग रहनेछैन। कुसङ्गतिबाट बच्नुहोस, घाटा हुनेछ। जोखिम र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। आयमा निश्चितता हुनेछ।
धनु:- बौद्धिक कार्य सफल हुनेछ। नाफाको अवसर आउँछ। यात्रा गर्दा सावधान रहनुहोस्। त्यहाँ पारिवारिक कार्यक्रममा भाग लिने मौका हुनेछ। स्वादिष्ट खानाको आनन्द पाइनेछ । आफूसँग बहुमूल्य चीजहरू राख्नुहोस्। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। विवाद नगर्नुहोस्। बेचैनी हुनेछ।
मकर:- जीवनसाथीसँग झ,गडा हुन सक्छ। सम्पत्ती को ठूलो सम्झौता ठूलो लाभ दिन सक्छ। बेरोजगारी हट्नेछ। त्यहाँ क्यारियर बनाउने अवसरहरू छन्। तपाईं काम मा प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। परिवारको सहयोगले कामलाई सजिलो बनाउँदछ। अरूको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। ढिलाइबाट बच्नुहोस्।
कुम्भ:- आशंकाको कारण, कार्यको गति ढिलो हुन सक्छ। परिवारको कुनै पनि सदस्यको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ताको विषय हुनेछ। विवाह प्रस्ताव प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यापार मा वृद्धि को संभावनाहरु छन्। सबै पक्षबाट सफलता प्राप्त हुनेछ। खराब व्यक्तिले हा,नि गर्न सक्छ। फाइदा हुन्छ।
मीन:- स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ। बोलीमा हल्का शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। विशेष गरी महिलाहरूले सवारी साधन, मेसिनरी र आगो आदिको प्रयोगमा होशियार हुनुपर्छ। कामको गति ढिलो हुनेछ। बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोस्। अधिक प्रयास गर्नुपर्नेछ। निराशा हावी हुनेछ। आयमा निश्चितता हुनेछ। व्यापार ठीक हुनेछ। फाइदा हुन्छ।
प्रकाशित मिति २०७८ असार ९ गते बुधबार ०१:३२